Xiliga Biloowga/Dhamaadka 7:50am-4:45pm
Lambarka Taleefanka 617-427-1177
Asagoo kuyaala Xaafada Grove Hall ee deegaanka Dorchester, dugsiga Mother Caroline Academy (MCA) waa mid gaar loo leeyahay, oo lacag la'aan ah kaasoo ay dhigtaan gabdhaha fasalada 4-8 ee kasoo jeeda qoysaska faqiirka ah. Dhisida jidkii lagu gaari lahaa dugsiga sare waxay ubaahantahay heerar sare iyo fahan qoto dheer oo laga haysto arday kasta hibadiisa iyo caqabadaha haysta. Maadaama aan nahay dugsi aqoonsi ka haysta Ururka Madaxa banaan ee Dugsiyada New England (AISNE), waxaan ardayda kuhayna heerar sare oo waxbarasho ee maadooyinka Xisaabta, Sayniska, Ingiriisiga, Taariikhda, Cilmiga Bulshada iyo Farshaxanka. Anagoo u adeegayna gabdhaha dhamaan diimaha, isirada iyo dhaqanada kaladuwan ee ka kala yimid xaafadaha Boston, yoolka dugsiga waa in la bixiyo waxbarasho tayo sare leh taasoo hormarinaysa hibada mid kasta oo kamid ah ardayda una diyaarinaysa waxbarashada dugsiyada sare ee tartanka loogu jiro iyo kuleejka.
Asagoo la aasaasay sanadki 1993, Mother Caroline Academy waa dugsi lacag la'aan ah, madax banaan, oo loogu talagalay gabdhaha dhigta Fasalada 4-8, kasoo u adeegga qoysaska danyarta ah ee reer Boston. Yoolkeena waa in la bixiyo waxbarasho tayo sare leh taasoo hormarinaysa hibada mid kasta oo kamid ah ardayda una diyaarinaysa waxbarashada dugsiyada sare ee tartanka loogu jiro iyo kuleejkaba.
Waxaan utaagananahay inaan lahaano deegaan amaan ah halkaasoo gabar kasta ay ku hormarin karto diihaalka nafteeda, kalsoonida nafteeda ayna awood uyeelato inay udoodo dadka kale ayna samayso go'aano caafimaad qaba oo la xiriira masiirka nolosheeda. Waxaan iskaashi la leenahay waalidiinta iyo dadka waawayn ee daryeelka siiya caruurta si aan ardayda uga caawino inay hormariyaan mooraal sare iyo dareenka baahiyahooda shaqsiga ah si ay uga faa'iidaystaan fursadaha iyo caqabadaha nolosha.
Waxaan ka faa'iidaysanaa waxbarashada ku salaysan mashruuca si aan ardayda ugu dardargalino mawduuca waxbarashada iyo hormarinta iskaashiga, fakarka waxgalka ah, xiriirka iyo xalinta caqabadaha. Marka aan fasalka lagu jirin, waxaan siinaa ardayda khibrado ay ku dhisaan aqoon iyo xirfado ee muhiimka u ah nolosha inta lagu jiro barnaamijyada dugsiga ee maalintii oo dhan ayna kujiraan ciyaaraha, farshaxanka, STEM, kooxaha ardayda, safarada gudaha dugsiga iyo barashada adeegyada.
Students can arrive as early as 7:15 AM. Homeroom with breakfast begins at 7:50 AM. Chapel begins at 8:20 AM.
Waxaa jira barnaamijyo aad ubadan oo nashaadaadka ardaydu samayso galabkii ah. Nashaadaadka ardaydu waxay bilowdaan 3:30 PM waxayna dhamaadaan 4:45 PM. Dhamaan ardayda waxaa laga doonaya inay ka qaybgalaan nashaadaadka galabtii.
Fasalada 4 iyo 5 waxaa laga rabaa inay xirtaan goonooyin buluug ah oo tolan iyo shaatiyaal jilicsan oo MCA ah. Fasalada 6-8 waxay xiran karaan goonooyin ama surweelada bulji ah midkood.
Waxaan utaagananahay inaan lahaano deegaan amaan ah halkaasoo gabar kasta ay ku hormarin karto diihaalka nafteeda, kalsoonida nafteeda ayna awood uyeelato inay udoodo dadka kale ayna samayso go'aano caafimaad qaba oo la xiriira masiirka nolosheeda.
Waxaan iskaashi la leenahay waalidiinta iyo dadka waawayn ee daryeelka siiya caruurta si aan ardayda uga caawino inay hormariyaan mooraal sare iyo dareenka baahiyahooda shaqsiga ah si ay uga faa'iidaystaan fursadaha iyo caqabadaha nolosha.
Soosarka, Kubada Kolleyga